CAREER : Largest BPO in Myanmar
MIBS is filled with incredibly smart, talented and interesting people. When you join us, you will find yourself to beapart of brilliant like-minded team from diverse backgrounds. Along with your daily work schedules you will get the chance to take part inavariety of initiatives and events including taking part in CSR activities. The employee-centric culture makes daily challenges enjoyable, which makes MIBSagreat place to work.
MIBS encouragesalearning culture through mentoring. When you are new to the company you havealot of questions and there’s nothing like being able to speak to someone at work who’s ‘been there and done that’. It’sagreat way to turn your understanding from the theory and put it into practice.
MIBS is committed to the belief that excellent people working together inacollaborative environment create an organization par excellence. We acknowledge the fact that we are stronger and more effective asateam than as individuals. So we cultivate an open, communicative culture where individuals are encouraged to offer suggestions for improvement. Based on these suggestions MIBS has consistently updated and ensured employee centric work policies & practices.
Our people are our greatest assets. We believe in developing talent at all stages of their careers and empower them with process and technology. This continuous learning opportunity helps them to grow and take on new challenges professionally. There are regular training programs and motivational sessions. It regularly invests in development and upgrading skills of their team members.
We have monthly reward and recognition programs, which consistently identifies and promotes top performers. Monthly birthday celebrations are best experienced than being told about.
Apart from the regular pick and drop facility the dine-in cafeteria and the recreation room offer ample avenues to unwind and socialize. We also ensure the compliance of all government regulated employment benefits along with attractive incentive programs.
Trainer2Yangon Apply Now »
Sales Specialist - Cyber Security 1 Yangon Apply Now »
Customer Service Agent 90 Yangon Apply Now »
Assistant Operations Manager 1 Mandalay Apply Now »
Operations Manager 1 Mandalay Apply Now »
Customer Service Agent 60 Mandalay Apply Now »
Admin Executive2Yangon Apply Now »
Send Your Job Application Here!
Sales Specialist - Cyber Security Solutions
Business Development ဖောက်သည်အသစ်များကို ရှာဖွေနိုင်ရပါမယ်။
Meeting များအတွက် သေချာပြင်ဆင်ကာ Cyber Security ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းယုံကြည်မှုရှိရှိဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးရပါမယ်။
လက်ရှိ Client များ၊ ရေရှည် Client များနှင့် Business Relationships များ တည်ဆောက်နိုင်ရပါမယ်။
Client ရဲ့လိုအပ်မှုကို နားလည်ပြီး သူတို့မေးခွန်းတွေအတွက် သင့်လျော်တဲ့အဖြေကို ဆီလျော်စွာပြန်ဖြေပေးနိုင်ရပါမယ်။
Client ရဲ့ proposals တွေကို အာရုံတစိုက်တုန့်ပြန်နိုင်ပြီး အဆိုပါ Proposal များအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့်အလုပ်များကို တက်တက်ကြွကြွ follow-up လုပ်နိုင်ရပါမယ်။
Cold Calling လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Appointments များဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များအတွက် Target များအကုန် ထိမိရမည်။
အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Goal များချမှတ်ရာတွင် Management Team နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရေတို/ရေရှည် စီမံကိန်းများ အတွက် အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရမည်။
C-Level Executives များနှင့် ယုံကြည်မှုရှိရှိပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
Project လုပ်ဆောင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး Client နှင့် Operations Team ကြားတွင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။
ပညာရေး - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ IT/ Computer Science/ Technology နှင့်သက်ဆိုင်သောဘွဲ့ဆိုလျှင် ပိုကောင်းသည်။ Marketing/ Sales နှင့် Business Management တို့ကို သိသူဖြစ်ရမည်။
ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းမှု - အင်္ဂလိပ်စကား အရေး၊အပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။
အတွေ့အကြုံ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၂နှစ်ရှိရမည်။
လိင် - ကျား/ မ
အသက်အရွယ် - ၂၅နှစ်မှ၃၅နှစ်ကြား။
လစာ - ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများ / ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလမ်းကြောင်းများကို စစ်ဆေးရမည်။
အဖွဲရဲ့ အချိန်ဇယားကို စီမံခန့်ခွဲ ပြုလုပ်ပေးရမည်။
အဝင် / အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများကို အချိန်နဲ့အညီစီမံရမည်။
သတ်မှတ်ထားသောအ ရောင်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်မီရမည်။
ဖောက်သည်နှင့်အဖွဲကြား ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရမည်။
ဖောက်သည်များရဲ့ ဆက်သွယ်မှု၊ အကောင့်များနှင့် ဖိုင်စာရွက်စာတမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် မူဝါဒများကို လိုက်နာရမည်။
ဖောက်သည်များ နှင့် ဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားပြုလုပ်ရမည်။
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ (Microsoft နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ရမည်။)
သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
နိုင်ငံခြားသား နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သော အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်မှု ရှိရမည်။
အချိန်အလှည့်ကျ အလုပ်ဆင်းခြင်းကို လက်ခံနိုင်ရမည်။
ဖောက်သည်များနှင့် ထိရောက်ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ရမည်။
နေ့စဉ် ဝင်လာသော ဖုန်းခေါ်မှုများကို လက်ခံဖြေကြားနိုင်ရမည်။
ဖောက်သည်များရဲ့ ပြသာနာများကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
အချက်အလက်များကို စာရင်းပေးသွင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။
စိတ်ရှည်ပြီး ပြေပြစ်ချောမွေ့သော အသံဝန်ဆောင်မှု ရှိရမည်။
အနည်းဆုံး ဆယ်တန်း အောင်မြင်ရမည်။ ဘွဲ့ရ (သို့) အဝေးသင် တက်ထားရမည်။
အသက် (18) နှစ် မှ အသက် (28) အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက် ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။ (မြန်မာ ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာ ရိုက်နိုင်ရမည်။)
အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆို ဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
Shifts များဖြင့် လုပ်ဆောင် နိုင်ရမည်။ ( မနက်7နာရီ မှ 12 နာရီအထိ)
* Work From Home ကာလ ဖြစ်၍ Laptop သို့မဟုတ် Desktop ရှိသူများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂျစ်တယ်နှင့်ပုံနှိပ်အတွက်လိုအပ်သော ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများအတက် တာဝန်ယူရမည်။ (ဥပမာ-ဗီဒီယိုနှင့်လက်စွဲစာအုပ်များဖန်တီးခြင်း။)
ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များနှင့် အရောင်းအဝယ်နည်းစနစ်များအကြောင်း အတန်းတွင်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကိုစီစဉ်ရပါမည်။
တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့၏စွမ်းရည်ကွာဟချက်များကို ခွဲခြားတတ်ရမည်။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်အသစ်များအတွက် လမ်းညွှန်သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များကို ညှိနှိုင်းရမည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ Telecom၊ ဖုန်းဟန်းဆက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်ရှိရမည်။
ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဒီပလိုမာ သို့ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။)
Customer Services နှင့်ပတ်သက်သော တာဝန်များကို နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲ ရပါမည်။
အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အလိုက် နေ့စဉ် ခေါ်ဆိုမှု မှတ်တမ်းနှင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးရပါမည်။
ဝန်ထမ်းများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးအပေါ် မူတည်ပြီး အကဲဖြတ်ရပါမည်။
ဝန်ထမ်းများ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေရန် ကြီးကြပ်ရမည်။
ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ သူတိုရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာရမည်။
ဖောက်သည်များရဲ့ အပြုအမူများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရမည်။
ဖောက်သည်များထံမှ တိုင်ကြားချက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ရပါမည်။
ဝန်ထမ်းများအား ကုမ္ပဏီရဲ့ ပေါ်လစီများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရန် ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရပါမည်။
မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို ( BMA ဘွဲ များအားပိုမိုဦးစားပေးမည်။)
Call Center နယ်ပယ်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် ရှိရမည်။
ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ (Excel, Microsoft,Power Point etc.)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Shift များဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရသူ ဖြစ်ရမည်။
စာရေးကိရိယာများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ရုံးလိုအပ်ချက်များ အတွက် မှာယူပေးခြင်း။
နေ့စဉ်မီတာ နှင့် မီးစက်ဒီဇယ်ဆီကို စစ်ဆေးခြင်း။
လုပ်ငန်းကြမ်းပြင် သန့်ရှင်းရေးကို စစ်ဆေးခြင်း နှင့် နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းများကို လိုအပ်ချက် ရှိပါက ဖြည့်ဆည်းခြင်း။
နိုင်ငံခြား စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်းများအတွက် Form C / Visa သက်တမ်းတိုးခြင်း/ FRC ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
ရုံးအုပ်ချုပ်ရေး နှင့် စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား နှင့် ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ရမည်။
ရုံးစီမံခန့်ခွဲရေး နှင့် ဆိုင်‌သော အရာများကို အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ (အထူးသဖြင့် MS Office Software)။
အဖွဲ့အစည်း နှင့် အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်အား အထူးကောင်းမွန်ရမည်။
အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်မှ (၂) နှစ်ရှိရမည်။
Quality Analysts - Call Center
Call Center လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အရည်အသွေးအာမခံချက်မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မူကြမ်းရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်များနှင့် အခြားအရည်အသွေး အာမခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရမည်။
ဖောက်သည်များ၏တိုင်ကြားချက်နှင့် လိုက်နာမှုရှိ/မရှိကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
အရည်အသွေးစနစ်တိုးတက်စေရန် အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ရမည်။
အရည်အသွေးရှိသော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အစီရင်ခံစာများကိုပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။
လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီး စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
နေ့စဉ်အဝင် / အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
CSAT ရမှတ်များမည်သို့တွက်ချက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ မျှတသောအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
Customer Services နှင့်ပတ်သက်သော တာဝန်များကို နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။
အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ်နှင့် နှစ်ပတ်လည်အလိုက် နေ့စဉ်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်ရည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးရပါမည်။
ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးအပေါ်မူတည်ပြီး အကဲဖြတ်ရပါမည်။
Operations Manager အဖြစ် ၁ နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရပါမည်။
လက်ထောက်မန်နေဂျာအဖြစ် ၁-၃ နှစ် ထိ ဆောင်ရွက်ဖူးသူဖြစ်ရပါမည်။
Call Center အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
Call Center KPIs ကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းသည် အနည်းဆုံး အထက်တန်းအောင်မြင်ရမည်။
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (သို့) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
Cyber Security Analyst - Cyber Security Solutions
၂၄နာရီ ၇ရက်လုံး MSSP ကဏ္ဍ များအတွက် SIEM monitoring ပြုလုပ်၍ သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်လုပ်ထုံးများနှင့် အညီ အဖြစ်အပျက်များအား အရေးပေါ်သတင်းပို့ပေးရမည်။
အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် အခင်းကိစ္စများကို ဖောက်သည်နှင့် အတူညိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍ ပိတ်သိမ်းပေးနိုင်ရမည်။
ဖောက်သည်၏ တိုင်တန်းမှုနှင့် အရေးကြီးဖြစ်စဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်၍ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရှင်းနိုင်ရမည်။
Network အသွားအလာ ဖြစ်စဉ် နှင့် တင်သွင်းခြင်း ကိစ္စရပ်များကို စနစ်တကျ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပြီး အစီရင်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
ကျူးကျော်ရန် ကြိုးပမ်းမှု နှင့် မှားယွင်းတဲ့ သတိ‌ပေး ချက်များကို နားလည်ကွဲပြားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ နှင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများကို ခွဲခြားစွာ သိနိုင်ရမည်။
လုံခြုံရေးသတိပေးချက်အတွက် အကြောင်းကြားစာရေးခြင်းများ ၊ အခြားအဖွဲ့များအား ခြိမ်းခြောက်မှုများ အကြောင်းအကြံပေးခြင်းများ ၊ ဦးစားပေးအဆင့်များ နှင့် လုံခြုံရေးအဆင့်များအပေါ် အခြေခံ၍ အဖြစ်အပျက်များကို သိမှတ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
ဦးစားပေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပုံမှန်လည်ပတ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်ရမည်။
Network ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်တဲ့ web mail FTP စတာတွေကို နားလည်နိုင်ခြင်း ၊ Network အားနည်းချက် နှင့် တိုက်ခိုက်မှု ပုံစံများ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိရုံသာမက မည်သည့် သွေဖယ်မှုမဆို SLA စီမံခန့်ခွဲမှုအား L2 ထိ တိုးမြှင့်ထားတတ်ခြင်း ရှိသူဖြစ်ရမည်။
Cyber နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ (၄)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
နိုင်ငံခြားသားများနှင့် စကားပြောဆို ဆက်သွယ်နိုင်ရမည်။
ဖိအားအောက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။